Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo maalmo la la'aa kaddib kulan ka soo muuqday - HOBYOMEDIA
Home Uncategorized WARARKA MAANTA Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo maalmo la la’aa kaddib kulan ka soo...
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo maalmo la la’aa kaddib kulan ka soo muuqday
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sida ay baahisay Villa Soomaaliya kulan la qaatay Madaxweynaha dalka Isu-Tagga Imaaraadka Carabta Mudane Sheekh Maxamed Binu Saayid.
Kulanka Labada Madaxweyne ayaa la sheegay in lagaga wada hadlay adkaynta xidhiidhka labada dal, iyo sida la isaga kaashan lahaa ganacsiga.
“Kulankan ayaa lagu lafa guray hagaajinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal, fududeynta dhaq-dhaqaaqa ganacsiga, isu-socdka muwaadiniinta iyo bixinta dal ku galka.
Madaxweyne Maxamed Bin Saayid ayaa Madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahad-celiyey ajiibidda marti-qaadkii ay u fidiyeen, waxa uuna soo bandhigay doorka ay dowladdiisu ka qaadanayso gurmadka abaaraha ka jira dalkeenna iyo dib u soo celinta taageeradooda ku aaddan ammaanka iyo adeegyada bulshada ee dowladda Imaaraatku ay ka fulin jirtay dalkeenna.Dhankiisa.” ayaa lagu sheegay warsaxafaadeedka ka soo Villa Soomaaliya.
Previous article10 dagaalyahan oo Mareykan iyo Faransiis ah iyo 100 Ruush ah oo isaga hor yimid dagaalka Ukraine
Next articleXiisada ka taagan degmada guriceel iyo Ciidamo la wareegay Qaybo ka mid ah Magaladaas